Gasket ratram-by dia misy kasety metaly "V-form" (na "W-form") ary kasety tsy metaly, izay mifampitampita ary ratra hatrany. Feature Wide Scope misy ny fepetra azo ekena. Azo ampiasaina amin'ny mari-pana ambony, ny tsindry ambony ary ny mari-pana ultra-low na ny fantsom-bovoka. Ny fanovana ny fitambaran'ireo akora gasket dia ny famahana ny olan'ny lozika simika an'ny medi ...
Sakany midadasika amin'ny fepetra miasa azo ekena. Azo ampiasaina amin'ny mari-pana ambony, ny tsindry ambony ary ny mari-pana ultra-low na ny fantsom-bovoka. Manova ny fitambaran'ireo akora gasket dia ny famahana ny olan'ny lozika simika ataon'ny haino aman-jery maro samihafa mankany amin'ilay gasket.
Fepetra takiana tsy dia henjana loatra amin'ny volon'ny flange. Azo ampiasaina hamehezana flanges miaraka amin'ny tampon-tany
Fametrahana mora sy fampiasana mora ampiasaina.
Vokatra sy karazana
Spiral Wound Gasket feno Graphite
(Amin'ny tontolon'ny fihenan-tsakafo) -240 ~ + 550 ℃ ； (Amin'ny tontolo tsy oxidizing) -240 ~ + 870 ℃
(Eo ambanin'ny rano mafana, menaka sns) 30 Mpa; (Eo ambanin'ny menaka etona, gazy sns.) 20 Mpa
Spiral Wound Gasket feno Asbestos
Spiral Wound Gasket feno PTFE
Ny Gasket Spiral Wound dia ampiasaina amin'ny valves & pipes, vessel pressure, condenser, flanges exchanger hafanana amin'ny indostrian'ny solika, simika, metallurgy, sambo ary mekanika mekanika.